हामी बिना हाम्रो बारेमा केहि छैन
हाम्रो Gateways Family Advocacy Network (G-FAN) तपाईंजस्ता ग्राहकहरू र परिवारका सदस्यहरू मिलेर बनेको छ जसले आफू र आफ्ना प्रियजनहरूले जीवन वृद्धि गर्ने सेवाहरू प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कसरी मद्दत गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ। केवल वकालत मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि संरक्षण र अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्। NH का धेरै बलियो अधिवक्ताहरू पहिले विगतका गम्भीर अवस्थाहरूबाट प्रभावित थिए, जसमा Laconia राज्य विद्यालय। अब, हामीलाई उत्कृष्ट अभ्यासहरू कायम राख्न र सेवाहरूमा सुधार र विस्तार गर्न तपाईं र तपाईंको सामूहिक समर्थन चाहिन्छ।
कृपया गेटवे-फैमिली एड्भोकेसी नेटवर्क (G-FAN) मा सामेल हुनुहोस्
गेटवे सामुदायिक सेवाहरूको प्राथमिकताको रूपमा, G-FAN परिवारका सदस्यहरू र ग्राहकहरूको समूह हो, जसमा हाम्रा केही बोर्ड सदस्यहरू, पारिवारिक समर्थन परिषद्का सदस्यहरू, र कर्मचारीहरू पनि समावेश छन्। हामी वकालतका अवसरहरू र जानकारीहरू साझा गर्छौं ताकि तपाईं राज्यका कार्यहरू बारे जान्नुहोस् जसले तपाईंको सेवाहरूलाई असर गर्न सक्छ। तपाईंले हाम्रा विधायी इमेलहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ जसको माध्यमबाट तपाईंले स्टेट हाउसमा के भइरहेको छ र आफ्नो लागि वकालत गर्ने अवसरहरू बारे थप जान्नुहुनेछ।
अंग्रेजी फारम स्पेनिश फारम
किन? विधायक र सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले DD (विकास असक्षमता) र ABD (अधिग्रहित मस्तिष्क विकार) सेवाहरूको उपलब्धता र गुणस्तर निर्धारण गर्ने निर्णयहरू गर्छन्। सेवाहरूको लागि धेरै रकम राज्य डलरबाट आउँछ। हाम्रो इनपुट बिना, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको छनौटले हाम्रो जीवनमा कत्तिको गहिरो प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्न सक्दैनन्।
तपाईं विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यहाँ लगभग छ। प्रत्येक दुई वर्षमा विधायिकामा 33% कारोबार। त्यो 400 सदन प्रतिनिधि मध्ये 130 र 24 सिनेटर मध्ये 8 हो। यी जीवनका सबै क्षेत्रका मानिसहरू हुन्, जसमध्ये केहीलाई विकासात्मक असक्षमता प्रणालीसँग कुनै अनुभव छैन। उनीहरूलाई प्रत्येक विधायी सत्रमा पेश गरिएका 1,000 भन्दा बढी बिलहरू विचार गर्ने काम पनि दिइएको छ। तसर्थ, हाम्रा विधायकहरूलाई व्यक्तिहरू चाहिन्छ जसले उनीहरूलाई कानूनको परिचय र मतदान गर्ने कार्यहरूसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू र अवसरहरूको बारेमा जानकारी गराउन सक्छन्।
राम्रो DD र ABD सेवाहरूको लागि जानकारी गरौं र वकालत गरौं। कृपया Sue O'Callaghan, Gateways Community Services' को सार्वजनिक/कानूनी मामिलाका निर्देशक र चीफ अफ स्टाफ, मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्। socallaghan@gatewayscs.org थप जान्नको लागि।
आफ्ना विधायकहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
नोट: विधायकहरूको लागि मानक इमेल firstname.lastname@leg.state.nh.us हो
तपाईको राज्यका विधायकहरू को हुन्?
निश्चित सहरहरूमा एकभन्दा बढी जिल्ला वा वार्डहरू छन्, तपाईंले कुन-कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ भनी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ मतदान स्थल खोजी.
वैकल्पिक रूपमा, निम्न सूचीहरू प्रयोग गरेर खोजी गर्नुहोस्:
राज्य सिनेटरहरूको सूची (क्षेत्र 6)
प्रदेश प्रतिनिधि सूची (क्षेत्र ६)
निम्न मार्फत थप जानकारी खोज्नुहोस्:
NH कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल
अतिरिक्त विधायकहरूको सूची (अर्थात् कार्यकारी परिषद् र गभर्नर)
मतदान स्थल खोजी (नाशुआ वार्ड नक्सा; तपाईका विधायकहरू को हुन् भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ)
यहाँका विधायकहरूले कुनै पनि मुद्दामा कसरी मतदान गरे हेर्नुहोस्
स्वास्थ्य र मानव सेवा (DHHS) मा NH विभाग मार्फत अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्।
NH सामान्य अदालत हेर्नुहोस्
इमेल socallaghan@gatewayscs.org सहायताको लागि।
बजेट प्रक्रियाको व्याख्या
निर्देशन/पार्किङ: एनएच स्टेट हाउस र कन्कर्डमा विधायी कार्यालय भवन (LOB) सम्म
हेर्नको लागि मुद्दाहरू - हाम्रा विधायकहरूले के जान्न आवश्यक छ
कृपया निम्नसँग मद्दत गर्नुहोस्:
आगामी राज्यको बजेट विकास सेवाहरूको लागि राज्यको समर्थनमा निर्माण हुने सुनिश्चित गर्नुहोस्। हामी गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्दैछौं, जसमध्ये केहीलाई संक्षिप्त रूपमा तल वर्णन गरिएको छ।
COVID-19 र कार्यबल संकट: कोभिड-१९ NH मा आउँदा असक्षमता अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता घटेको छैन र धेरै अवस्थामा, समर्थनको आवश्यकता बढेको छ।
महामारीको अग्रपंक्तिमा प्रत्यक्ष समर्थन प्रोफेशनलहरू खोज्नु र कायम राख्नुले पहिले नै कार्यबल संकटको रूपमा चिनिने कुरालाई बढाउँदैछ। धेरै विकासात्मक असक्षमता समुदायका सदस्यहरू परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्न आफ्नो जागिर छोड्न बाध्य हुन्छन् किनभने उनीहरूले योग्य हेरचाहकर्ताहरू फेला पार्न सक्दैनन्। हामी हाम्रा प्रतिनिधिहरूले समाधानहरू बुझेर कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्न उत्सुक छौं।
प्रतीक्षा सूची कोष: 2019 मा कानूनमा हस्ताक्षर गरिएको द्विदलीय बजेट सम्झौता (HB3र HB4) मा, विधायिका र राज्यपालले विकासात्मक असक्षमता/अक्वायर ब्रेन डिसअर्डर वेटलिस्टहरूको पूर्ण कोषलाई समर्थन गरे। 28 अगस्त, 2020 मा, स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागले रिपोर्ट गर्यो कि कुनै पनि व्यक्ति सेवाहरूको लागि पर्खिरहेका थिएनन्। विकासात्मक अपाङ्गता सेवाहरू कोष नपुगेको हुनाले, व्यक्ति र हेरचाहकर्ताहरूलाई सेवाहरूको लागि प्राय: प्रतीक्षा सूचीमा राखिएको छ। यसले स्वास्थ्य बिग्रन्छ, आर्थिक तनाव र अवसरहरू घट्छ, र यसैले हामी प्रतीक्षा सूचीहरूको पूर्ण कोषको लागि आग्रह गर्छौं।